Softmaker Hofisi 2021 yeLinux ikozvino yawanikwa mahara | Linux Vakapindwa muropa
Diego ChiGerman Gonzalez | 19/10/2021 19:28 | Yakagadziridzwa ku 20/10/2021 20:23 | General, Linux software
Kune vanhu vazhinji, kushandisa isiri-yemahara Linux software dzimwe nzira zvinoita sedzidziso. Nekudaro, kana usiri software yekupa marezenisi echisimba (Uye, handisi kuti pane chakakanganisika nekuva mumwe) uye iwe unokoshesa mashandiro, pane zvakanaka kwazvo sarudzo.. Softmaker MaharaOffice ndomumwe wavo.
Softmaker yaigadzira hofisi suite yeLinux (Yakabhadharwa) apo chete dzimwe sarudzo dzataive nadzo dzaive OpenOffice uye forogo yekuda kuziva yeBM inonzi Lotus Symphony. Sezvo nguva yakafamba, yakaburitsa yemahara vhezheni inotinetsa isu. FreeOffice. Kunyangwe yaive iine mashoma mashandiro pane hama yayo yakabhadharwa (Softmaker Hofisi) yaigara iine hungwaru hunyanzvi uye kuenderana zvirinani nemafomati epamutemo pane LibreOffice.
Kana iwe uri mushandisi weManjaro, iwe unotoziva FreeOffice nekuti iyo inosimudza inokupa iwe sarudzo yekuisarudza sehofisi suite pane LibreOffice
1 Softmaker FreeOffice 2021 iripo.Nei uchifanira kuyedza.
Softmaker FreeOffice 2021 iripo.Nei uchifanira kuyedza.
Ramba uchifunga kuti isu hatisi kutaura nezve shareware. Ndokureva, harisi hofisi suite iyo inokupa iwe zvizere mabhenefiti kwenguva pfupi yenguva, kana iyo inoisa watermark kana kumisikidza imwe mhando yeanorambidzwa ekurambidza. Iwo mapurogiramu anoshanda zvizere kwenguva yakareba sezvaunoda, kune ese ari maviri ekutengeserana uye epamba kushandiswa.
Kana iwe uri mumwe wevaya vasingavimbi negore, asi nyora pane yako nhare, zvakare ine vhezheni yeApple.
Chimwe chinhu chakakosha ndechekuti Pamusoro pekuenderana kwayo neFreeOffice mafomati, uye neayo, inoshandawo natively neFomu, Excel uye Powerpoint mafomati.
Microsoft payakachinja kubva kuOffice interface kuenda kune iyo tepi interface, vazhinji vakaivenga vamwe vachiida. Softmaker FreeOffice inokwanisa kugutsa munhu wese kubva ipapo unogona kusarudza ribhoni kana yechinyakare menyu. Zvisinei, kana ukasarudza ribhoni, haufanire kusiya mamenyu. Muchiitiko chekuti iwe uine yekubata skrini yakabatana necomputer, iwe une yakanyatsogadzirirwa modhi, kana ukasarudza iyo, unenge uine mahombe mahombe uye yakakura nzvimbo pakati pezvinhu zvemushandisi interface, kunyangwe iwe wasarudza ribhoni zvinoenderana neyechinyakare menyu.
Chaizvoizvo, Textmaker inodarika yakapusa izwi processor nekuti ine desktop post yekugadzira mashandiro, Kune izvi zvakafanorondedzera zvimiro uye mukana wekudhira mahara. Mifananidzo mumafomati akasiyana inogona kuiswa, kuwedzera pakuigadzirisa nekugadzirisa uye kugadzirisa kupenya, kusiyanisa uye kukosha kwegamma. Iyo zvakare yakakosha yekugadzira isinganyanyo kuomarara magwaro ehunyanzvi sezvo ichisanganisira yakakura raibhurari yekugadzira mafashcharts uye marati machati.
Kuenda kune akasarudzika mazwi ekugadzirisa mabasa. Pamusoro peMicrosoft uye LibreOffice mafomati, inogona kushanda neRTF, HTML, Pocket Izwi, ASCII uye Unicode mafomati.
Chimwe chinhu chinonakidza kugadzirwa kwemagwaro muPDF fomati inosanganisira zvinyorwa uye mabhukumaki.
Makore apfuura ini ndakadhinda rondedzero yemitengo yebhizinesi yemhuri yemapfekero. Yaifanirwa kukwana pane imwechete peji A4 yakarara yakati sandara uye yakatsemuka kubva pamakumi maviri kusvika makumi matatu ezvinhu ane gumi nemashanu saizi imwe neimwe. Ini ndinoreurura kuti ini handina kumbobvira ndakwanisa kuziva kuzviita muLibreOffice uye ini ndakakwanisa neGnumeric kudzamara ndatanga kushandisa PlanMaker. Zvese izvi kutaura kuti rimwe remabasa aro ndere kuona nenzira shanu dzakasiyana kuti gwaro rinofanira kupurinda pamapeji mangani.
Pepa rega rega rinogona kusvika pamamirioni 1 miriyoni uye makiromita 16384 muhukuru maunokwanisa kuita zvinopfuura mazana mana nemakumi matatu emabasa ekuverenga anosanganisira manhamba akaomarara uye matrices.
Mufananidzo unozivikanwa kuve unokosha kupfuura mazwi chiuru. Nechikonzero ichi, PlanMaker inopa anopfuura makumi masere emhando dzakasiyana dzemachati anosanganisira mabara, pictograms uye pie.
Sezvatakambotaura, zvinoenderana neCalc neExcel
Kana, seni, uine hushoma hunyanzvi hwekugadzira graphic kupfuura Steve Wonder, chirongwa chekuratidzira chine akati wandei matemplate. Kunge kesi dzakapfuura, tenzi masiraidhi anoenderana nePowerpoint.
Zvemifananidzo uye faira shanduko (iyo inogona kusanganiswa) Softmaker inoshandisa OpenGL.
Panguva yekuratidzwa, iwe unogona kuzviita otomatiki kana iwe pachako. Pamusoro pekukubatsira iwe nepenzura chaiyo.
Ini ndinotenda kuti chisungo chedu sevashambadziri ndechekutaura pane dzimwe nzira dzese dzinogona kuitika uye rega iwe uzviedze uye usarudze dzaunoda zvakanyanya.. Kana mumwe munhu akandikumbira kuti ndiise pirated vhezheni yeMicrosoft Office, ini ndinokurudzira kuti vape FreeOffice kuyedza, uye hapana munhu akambosuwa. Zvakare, isarudzo yangu pandinotora zororo kubva kuUbuntu uye nekuisa Manjaro.
Kana iwe uchida kuyedza, aya ndiwo maratidziro
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Softmaker FreeOffice 2021 iripo. Mahara hofisi suite yeLinux, Windows uye Mac
Zachariaas Saint akadaro
Mushonga wekutanga wakasununguka.
Pindura Zakaria Mutsvene
Iwe unokanganisa pfungwa dze freeware ne shareware.
Ehe. Warevesa. Ndatenda
hapana zvemahara ,,, ingoedza.
Yemahara Hofisi ndiyo yakanakisa imwe nzira kuMicrosoft Office, pamusoro pekusununguka, kuenderana kwayo kunoshamisa. Ini zvakare ndine OnlyOffice yakaiswa kuti ienderane zvakanyanya.